ekhaya > Qeqesha uhambo eJamani > Kutheni Uloliwe Iindawo ezinika umdla In Germany Inxaniwe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/12/2020)
IJamani ineentaba eziphakamileyo, iindawo ezisemaphandleni zokuphefumla, nezixeko cosmopolitan ezithi zenze uhambo ngololiwe apho amava ovusa. Nazi iindawo ezininzi nemangalisayo ukubona kubandakanya iBerlin, eMunich, Hamburg, Cologne, no Frankfurt, nabanye abaninzi. Le miceli mngeni kunye needolophu ezincinci zonke amaqhina oqhagamshelwano yi kakuhle i-hi speed kwenkqubo yezoololiwe. Oku kwenza umdla kuloliwe Germany ukuze lula. Apha is isisikhokelo holidaymakers for umdla Uloliwe e Germany ukuqinisekisa ukuba kakhulu uhambo mnandi kunokwenzeka.
Kukho nezinye iindlela Yokuqeqesha umdla e Germany ezifana-high speed oololiwe zasekhaya, the ICE (amabanga Express). Le uloliwe uthandwa kakhulu Germany, kokuxhuma izixeko eziphambili ngesantya esiphezulu. le oololiwe-high speed ukuhamba ngesantya efikelela kwi 200mph (320 km / h).
Ukusetyenziswa okuhamba kakuhle koqeqesho eJamani kusemini, kuquka fast Umzila Express, ayidingi ukubekelwa isihlalo. kunjalo, ukuba uceba uhambo lwakho akukho ngozi kubhukishelwa izihlalo zakho kwangethuba. Ukunqabiseka isihlalo window ubuhle okanye khetha nje isihlalo sakho ukuqinisekisa ukuba unokuthuthuzeleka eliphezulu.
ezinye oololiwe International yaye imizila yokulala ezifana ku Paris, Brussels, Venice, okanye Copenhagen ifuna ukuba une ugcino phambi zokubhoda. Xa usebenzisa i Gcina A Train isiza babhukishe amatikiti etreyini yakho, yona iya kuchaza ukuba kufuneka ukuba okanye hayi ukuba wenze ubhukisho.
Uninzi lwezikhululo zikaloliwe zaseJamani zineebhanki ezininzi ze izitshixo ngendlela eyahlukeneyo. Oku ukulungiselela neyabancinane imithwalo emikhulu. Ukuba une ngeyure okanye ngoko phambi kokuxhuma amagqabi zakho uloliwe, ubeke wakho Impahla ibe ilokhari, hamba isiselo, okanye jonga elifutshane emhlabeni kwindawo engqongileyo.
Ixabiso neelokhari limisela ixabiso labo. Oku kuthetha ukuba ufuna ukugcina kancinane imithwalo, uya kuhlawula ngaphantsi and vice versa. Ixabiso uluhlu neelokhari zesikhululo eJamani iphakathi € 1 – € 5 ukuze 24 iiyure sebenzisa.
Germany yindawo enkulu ahambe nosapho. Koololiwe kaloliwe German, abantwana abangaphantsi kweminyaka emithandathu bahamba simahla kungekho tikiti lifunekayo. Abantwana ngaphezulu 6 kodwa abangaphantsi 15 ndiyahamba for free zakubanje lukhatshwe omdala imali ohlawula.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)